Ma run baa in Axmed Madoobe uu bil waliba hub siiyo Shabaab? - Hablaha Media Network
Ma run baa in Axmed Madoobe uu bil waliba hub siiyo Shabaab?
HMN:- Xildhibaan ka tirsanaa baarlamaanka maamulka Jubbaland oo dhawaan laga saaray xubinimada baarlamaanka ayaa ka hadlay xiriirka ka dhexeeya Hogaamiyaha maamulka Jubbaland Axmed Madoobe iyo Maleeshiyaadka Shabaab.
Ex Xildhibaan Maxamed Cali Yuusuf, ayaa sheegay inuu jiro xiriir dhow oo Hogaamiyaha maamulka kala dhexeeya Shabaab, waxa uuna tilmaamay inay u hayaan cadeymo.
Maxamed Cali, oo u waramaayay Idaacada SMN ee magaalada Muqdisho, ayaa tilmaamay in Hogaamiyaha maamulka uu maleeshiyaadka u qoondeeyay Saanad Militeri oo joogta ah, si buu yiri ay usii socdaan dagaalada ay Kooxda kawadaan deegaanada maamulka iyo kuwa ku dhow dhow.
Waxa uu intaa raaciyay in xiriirka Axmed Madoobe kala dhexeeya Shabaab uu yahay mid ka fog keliya bixinta saanada, balse waxa uu DFS ugu baaqay in fiiro gaara ay u yeelato Axmed Madoobe.
Sidoo kale, waxa uu sheegay Maxamed Cali Yuusuf in Axmed Madoobe ay toos u wada xiriiran Shabaab, isagoo dowlada Somalia uga baaqay in baaritaano ay ku sameyso Hogaanka ugu sareeya maamulka Jubbaland.
Xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Maamulka Jubbaland ayaa dhawaan Xasaanada Xildhibaanimo kala laabtay Maxamed Cali Yuusuf oo lagu eedeeyay inuu u gafay Hogaamiyaha maamulka.
Dhinaca kale, Hogaamiyaha maamulka Jubbaland ayaa lagu eedeeyaa inuu caqabad ku yahay howlaha baarlamaanka maamulka, waxaana sidoo kale la sheegaa in baarlamaanka uu u adeegsado dhaqaale adag.